IPlume Piano limited ingumkhiqizi wezinsimbi osebenza ku-R & D yesoftware, ukuklanywa komkhiqizo, ukukhiqizwa nokumaketha kwepiyano eqondile, upiyano omkhulu, upiyano lwedijithali nepiyano ehlakaniphile. UPlume unamandla okukhiqiza amapiyano aqondile ayi-10,000, ama-piano amakhulu ayi-1,500, amasethi womthombo womsindo nekhibhodi, ama-piano ahlakaniphile ayi-20,000 kanye nama-piano wedijithali ayi-150,000 ngonyaka.
UPlume ungumnikazi welungelo lobunikazi bempahla yokusungula kanye nemikhiqizo ezimele, isikhungo sokucwaninga sobunjiniyela esihlakaniphile, esine-sampling system of design, injection molding, izinsimbi, ukuhlolwa komsindo nokulawulwa kwamanani. Sisebenza iminyaka eyi-12 sibambisana nezikhungo zocwaningo emhlabeni wonke, ukuhlinzeka amaklayenti ngolwazi oluhlakaniphile, olwenziwe ngabantu futhi olusebenzayo ekufundiseni umculo, ukudlala izinsimbi, ukusebenza, ukuhlala, ukujabulisa nokwelapha.
Imikhiqizo yethu i-Phoenix, i-Future Star nayo iyimikhiqizo edume umhlaba wonke, futhi senza ne-OEM ne-ODM yezinkampani ezisezingeni lomhlaba. Imikhiqizo yethu okwamanje ihlinzekwa e-USA, eJalimane, e-Italy, eRussia, eBrazil, e-Australia .Hongkong nakwamanye amazwe nezifunda ezingama-50, sinamalungelo obunikazi angaba ngu-20 wokusungulwa namamodeli wokusiza. UPlume uqashe umculi odumile emhlabeni, owayengusihlalo weChina Symphony Union uMnu. Bian Zushan njengomxhumanisi wezobuciko, umdlali wopiyano osemncane uNkk Cui Lan njengabagunyazi bosaziwayo, ososayensi uMnu Liu Yuliang noMnu Li Xiaodong eChina Chinese of Sciences (CAS ) njengomxhumanisi wezobuchwepheshe, uchwepheshe wezokuxhumana kwe-acoustics nonjiniyela omkhulu uMnu Yu Jilin njengomqondisi wezobuchwepheshe, bonke bangenza ukusekelwa okuqinile kwemikhiqizo nekhwalithi yethu.
Njengenkampani enhle kakhulu yokukhishwa kwezwe nobuchwepheshe obuphezulu embonini yamasiko kazwelonke, uPlume ugxile ekwakhiweni kobuhlakani, ukuklanywa komkhiqizo, ikhwalithi yethoni, ukuhlanganiswa kwemingcele nokuhlanganiswa kwemithombo. Nge-R & D esezingeni eliphakeme, umthamo wokukhiqiza onamandla, uhlelo olujwayelekile lokuphathwa kwekhwalithi, uletha imishini yochungechunge egcwele ekhaya nakwamanye amazwe, uPlume ungumenzi wepiyano wezobunhloli emhlabeni. Sineqembu lobungcweti lokuklama nokukhiqiza ukugcina ikhwalithi nokuqamba izinto ku-software naku-hardware.
Izitifiketi ze-ISO9001: 2015 management system, ISO14001: 2004 Management Management System, GB / T28001-2011 Occupational Health and Safety Management System, 3C, GS, TUV, RoHS, CE, FCC kanye ne-UL yiziqinisekiso eziqinile zokuqhubeka kwenkampani yethu. UPlume ungumphakeli oholayo wensimbi ehlakaniphile, ophathina bethu namakhasimende asizuzi ngokunotha kwethu kuphela kobuchwepheshe nobungcweti, kepha nangokuqeqeshwa nokusekelwa kwezobuchwepheshe okunikezwa abasebenzi bethu abakhaliphile, abanolwazi nabathembekile. UPlume uzibophezele ekubeni yinkampani ephawulekayo emkhakheni wezinsimbi ezihlakaniphile.
Ithimba lethu lizokunikeza impendulo esheshayo, iziphakamiso zobuchwepheshe kanye nekhotheshini ehamba phambili. Siyakwamukela imibuzo!
Ukulungiswa Kwepiyano Ledijithali, Ikhibhodi ye-Smart Piano, Ipiyano Eqondile Yedijithali, UPiano Oqondile Kagesi, Ugesi uPiano Omkhulu, I-piano yedijithali ephansi,